Vaovao - Mila atahorana tsy hampidi-doza ny mombamomba ny alimina namboarina
1. Tena tokony hamboarina manokana ve izy io?
Raha te-hanamboatra ny mombamomba ny aliminiôna ianao ho an'ny endriny ivelany amin'ny fitaovana, dia tsy tokony hamboarina manokana ianao, satria ny profil aluminium aliminiana mahazatra dia profil aluminium avo lenta avo lenta, ary misy famaritana marobe, afaka mahafeno saika ny filàna rehetra. ny rafitra. Ary ny kojakoja feno momba ny kojakoja, safidy isan-karazany ahafahanao misafidy. Ny olona sasany dia mety hilaza fa ny endriko ivelany dia tsy mahitsizoro fa polygonal, raha ny fizarana ankapobeny amin'ny alim-bolan'ny indostrialy kosa dia mahitsizoro na toradroa. Azoko atao ny milaza fa tsy misy olana koa, raha mbola ny tsipika fametrahana, tsy misy ny fanerena faneriterena, ny tranoben'ny fampirantiana aluminium dia miorina amin'ny mombamomba ny alimina indostrialy.
2. Ny alimina matevina, ny tsara kokoa?
Raha mila manamboatra ny mombamomba anao ianao dia tsy lafo ny manaingo azy. Ny vidin'ny fanokafana ny profil aluminium dia tena mora raha oharina amin'ny bobongolo hafa. Ny mombamomba ny aliminioma manokana dia mila mitana andraikitra iray, ka rehefa matevina indrindra ny famolavolana ny sary dia te hahatratra ny fahafaha-mitondra entana bebe kokoa. Saingy tiako ny milaza fa ny hatevin'ny rindrina dia tsy matevina kokoa noho ny tsara kokoa, amin'ny lafiny iray, ny matevina dia avo kokoa ny vidin'ny rindrina, ny vidin'ny firaka alimina dia somary avo, izay mampiakatra be ny vidiny; Etsy ankilany, ny matevina amin'ny rindrina, ny ambany dia henjana. Toy ny mombamomba ny aliminioma 6063 izay ataontsika matetika, ny fenitra henjana dia 8-12HW. Raha tena matevina ny hatevin'ny rindrina dia mety hahatratra 8HW ihany ny hamafiny. Ohatra, ny hatevin'ny rindrin'ny mombamomba ny alimina indostrialy mahazatra antsika dia 2mm ihany, fa ny endriny dia tena mitombina, izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny enta-mavesatra avo kokoa.
3. Azonao atao ve ny manambatra ireo profil roa ho iray?
Ny mpanjifa sasany dia te-hihary vola lany amin'ny bobongolo na manana hevitra hafa, misy karazana profil profil aluminium namboarina manokana, mila mampiasa fitambarana profil aluminium maro, ny mpamolavola orinasan'ny mpanjifa dia hanambatra ny bobongolo roa ho lasa bobongolo, mieritreritra fa mahavonjy izany zavatra maro. Raha ny marina dia hiteny aho fa hanemotra ny zavatra. Izahay indray mandeha dia nanana mpanjifa izay niasa toy izao. Tokony nanokatra lasitra roa izahay, ny iray misy rindrina manify tena ary ny iray rindrina matevina tokoa. Taty aoriana dia novako ny sary famolavolana ary natambatra ireo bobongolo roa, vokatr'izany ny bobongolo efa ho vaky. Niezaka nanova ny lasitra aho ary nanova ny bobongolo. Taorian'ny fotoanan'ny fitsapana N dia nahomby ireo lasitra. Satria malalaka loatra ny hatevin'ny rindrina, dia sarotra be ny mamokatra.
4. Iza no tompon'ilay lasitra profil aluminium natokana ho azy?
Ny kojakoja vita amin'ny aliminiana namboarina dia tokony hamboarina, ary ny saram-panokafana ny bobongolo dia aloan'ny mpanjifa (azo averina izany raha toa ka mahatratra taonina iray ny volan'ny fividianana isan-taona). Avy eo ny tompon'ny lasitra dia tsy maintsy ho ny mpanjifa, tsy azo isalasalana izany. Saingy ny lasitra amin'ny ankapobeny tsy alain'ny mpanjifa fa apetraka ao amin'ny mpanamboatra azy. Koa satria ny mombamomba ny aliminioma namboarina dia zara raha voadidy indray mandeha, dia kely ny fampiasana ny mpanjifa mody any aminy. Ny mpanamboatra dia manana trano fitehirizana bobongolo manokana hitahirizana ny bobongolo, ary ny bobongolo dia kalitaon'ny vy H13, tsy mora simba. Noho ny antony manokana dia misy mpanjifa te-hamerina ny lasitra ary hanova azy io amin'ny orinasa hafa hamokarana. Manoro hevitra anao aho mba hiezaka ny tsy hanao an'io ary manapa-kevitra hoe aiza no tianao anaovana azy alohan'ny hanokafanao ny lasitra. Satria ny mpanamboatra extruder aliminioma rehetra dia tsy mitovy, die pad, die fonosana koa tsy mitovy. Nihaona tamin'ny mpanjifa maro izahay izay te-hitondra ny lasiny any amin'ny ozininay hamokarana, saingy nolavinay izany.
Ny etsy ambony no tiako hampidirina, antenaiko fa afaka manampy anao izy io.